မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: မဗေဒါ ဆိုရာဝယ်....
ဆရာကြီးဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်းကဗျာထဲကမှ မဗေဒါ ဆိုတဲ့အမည် အမှန်ပါ။ ရာဇဝင်ထဲက မဗေဒါ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘေဓါရီ ပါ။ စာလုံးပေါင်းမှားနေနိုင်ပါတယ်။
ပြည်က မင်းကြီးတောင်ပေါ်မှာ ဘေဓါရီဂူ ဆိုပြီး သာသနိကအဆောက်အအုံတွေနဲ့အတူ အထင်အရှားရှိပါတယ်။ ရာဇဝင်ထဲက ဘေဓါရီကို ခပ်တုံးတုံးမိန်းမဆိုပြီး ရေးလိုက်တာတော့ မကောင်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ရာဇဝင်ထဲက ဘေဓါရီက သူ့ဟာသူ နေခဲ့တာပါ။ ဘလော့တွေထဲ ဝင်မလာပါဘူး။
Well, i just saying.. coz people keep mistaken me and calling me "mabaydar yay khat sin". That's why i say it. I don't care her name is BaydarYi or Mabaydar. I just can't accept they keep telling me this. And as for my opinion, I think she is stupid. I don't care whether she was from the history, I have my right to critized on her too. No offend if you respect her so much. This is just my opinoin.
မဗေဒါရေ ... ပို့စ်လေးကောင်းတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းတယ်။ မဗေဒါရဲ့ နာမည် ၊ အတွေး ၊ အရေးနဲ့ အပြင်က ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နဲ့ တစ်ကယ်လိုက်ဖက်ပါပေတယ်။
Ko Thinker said...
ခုမှ အားလို့ ခုမှပဲ လာနိုင်တယ်ဗျာ။ MBS မှာလည်း တွေ့ပါတယ်။
မဗေဒါအနေနဲ့ ယခုလို ပြန်လည်ဖြေရှင်းတဲ့အတွက်
9/18/2008 9:27 AM
အေးဗျ။ အခု လူအတော်များများက မဗေဒါ ဆိုတာနဲ့ မဗေဒါက တစ်ပင်တည်း၊ ဘဲအုပ်က တစ်ရာနှစ်ရာ ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလောက်ပဲ သိကြတော့တယ်။ ဆရာဇော်ဂျီရေးခဲ့တဲ့ ဗေဒါလမ်းကဗျာရဲ့ မူလရည်ရွယ်ချက်ကို မသိကြတာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မဗေဒါဆိုတဲ့ နာမည်ကို ပြောင်သလို လှောင်သလို လုပ်နေကြတာ နေမယ်။ အခုလို ကဗျာလေးနဲ့ ရှင်းပြထားတော့ ကဗျာ မဖတ်ဖူးတဲ့သူလည်း သိသွားရတာပေါ့။ ကျနော်လည်း ဒီကဗျာလေး မတွေ့လို့ မဖတ်ဖြစ်တာကြာပြီ။ ပြန်ဖတ်လိုက်တိုင်း တခါ အားတက်မိတယ်။ ကျေးဇူးပါ မဗေဒါ။
မကြီးရေ အလည်လာသွားပါတယ်.. လူတစ်ချို့က သူတို့လိုရာကို စွဲတွေးတတ်တယ်အမရ.. ဒီလိုပါပဲ လောကကြီမှာ .. အမ အစစအရာရာ အောင်မြင်ပါစေနော့်
တကယ့် အဓိပါယ်ရှိတဲ့ နာမည်လေးပါ....ဗေဒါရေ.. အမြဲတမ်း ပန်းပန်နိုင်ပါစေ... :)
2/08/2009 3:48 PM